တန်းတူညီမျှရေးနှင့် ပင်လုံစိတ်ဓာတ် . . . | NPE
တန်းတူညီမျှရေးနှင့် ပင်လုံစိတ်ဓာတ် . . .
သူ့ကျွန်ဘ၀က လွတ်မြောက်ပြီး ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီး နိုင်သော လွတ်လပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏သမိုင်းတွင် ပင်လုံ စာချုပ်က များစွာအရေးပါ၏။ သည့်ထက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကြည့်မြင်ပါလျှင် ပင်လုံညီလာခံနှင့် ပင်လုံစာချုပ်တို့၏ ကျေးဇူး က ကြီးလှသည်ဟု ဆိုရပါမည်။
တောင်တန်းမြေပြန့် မခွဲခြား၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတိုင်း တန်းတူညီမျှ လွတ်မြောက်ကြစို့ဟူသည့် မျှော်မှန်းချက်ကို အမြင့် ဆုံးလွှင့်ထူကာ နိုင်ငံသားတို့၏ သွေးစည်းမှုညီညွတ်မှုကို ပင်လုံ စာချုပ်ဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သည်။
လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူညီမျှမှုရှိရေး၊ မှန်ကန်သော တရားဥပဒေ၏ စောင့်ရှောက်မှုအရိပ်အောက်တွင် မည်သည့်ခွဲခြားမှုမှ မရှိရေး၊ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေး လူ့အခွင့် အရေးတို့ကို အားလုံးတူတူညီညီ ခံစားကြနိုင်ရေးသည် ညီညွတ် ရေးစိတ်ဓာတ် ပင်လုံစိတ်ဓာတ်၏ အခရာပင်ဖြစ်၏။
လူမျိုးစု မတူညီမှုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု မတူညီမှုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာကွဲပြားမှုကြောင့် ဖြစ်စေ၊ နေထိုင်သည့် နေရာဒေသ ပထဝီအနေအထား၊ သယံဇာတ အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေ အစရှိသော မည်သည့်အကြောင်းအချက် မျိုးကြောင့်ဖြစ်စေ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိရေးနှင့် တန်းတူညီမျှ သည့် စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုဖြစ်ရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသား ရေး မူဝါဒဖြစ်၏။
လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းစဉ်ကာလကတည်းက ချမှတ်ခဲ့သော အထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့် အမျိုးသားရေးမူဝါဒသည် ယနေ့ထက်တိုင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖြေရှာဖြေရှင်းနေရသည့် ပြည်တွင်းပဋိပက္ခ တို့၏ အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်လည်း တည်ရှိနေဆဲဖြစ် ပါသည်။
လူတို့သည် မည်သည့်နေရာမျိုးတွင်မဆို ဦးစားပေးမခံ ရချင်နေ၊ တန်းတူညီမျှဆက်ဆံခြင်းကိုတော့ ရရှိလိုသည်သာ ဖြစ်၏။ ထိုတန်းတူညီမျှမှုဆိုသည်က နိုင်ငံသားတိုင်း၏ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်၏။ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအခွင့် အရေးဟုဆိုလျှင် တန်းတူညီမျှမှုက လွန်စွာအခြေခံကျပါသည်။ တန်းတူညီမျှမှုမရှိလျှင် လူ့အခြေခံအခွင့်အရေးမရှိဟု ဆိုရ လောက်သည်အထိ တန်းတူညီမျှမှုက အရေးကြီး၏။
ထို့ကြောင့်ပင် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ဖြင့် သဘောတူခဲ့ကြသည့် တိုင်းရင်းသားတို့ကြားက တန်းတူညီမျှရေးသည် ထိပ်တန်း အရေးကြီးသည့် နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုမူဝါဒကို ခိုင်ခိုင်မာမာ အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက် နိုင်ရေးသည် ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက် သည့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို ယုံကြည်သူ ပြည်သူလူထုအားလုံး၏ တာဝန် လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်သူလူထုက မိမိတို့၏ဆန္ဒနှင့် သဘောထားကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်သော လူထုကိုယ်စား လှယ်များကို မဲပေးရွေးချယ်တာဝန်ပေးပြီးသည့်နောက် ထိုတာဝန် ပေးသည့်အတိုင်း အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်သည့် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်များနှင့် တရားစီရင်ရေးစနစ်ဖြစ်ရေးကို အားပေးကူညီရင်း အကဲခတ်စောင့်ကြည့် ထိန်းကျောင်းခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ရင့်ကျက်ခိုင်မာမှုကို တည်ဆောက် ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ ဒီမိုကရေစီခေတ် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်များနှင့် တရား စီရင်ရေးဟူသည့် မဏ္ဍိုင်ကြီးများနှင့်အတူ ပြည်သူလူထု၏ စည်းလုံးညီညွတ်သည့် စိတ်ဓာတ်ဖြင့် လွတ်လပ်ရေးမရခင် ကပင် ယုံကြည်မျှော်လင့်မှုများဖြင့် ချမှတ်ထားသော နိုင်ငံသား တို့၏ တန်းတူညီမျှရေး တည်တံ့မြဲမြံ တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ သတည်း။ ။